हामी मध्ये प्रत्येक, कम से कम एक पल्ट मेरो जीवन मा, एक ढीला स्टूल को रूप मा यस्तो अप्रिय घटना को सामना गर्न थियो, जस्तै यो पनि भनिन्छ, दस्त। यसैले, यो आश्चर्यजनक छैन कि अधिकांश मानिसहरू वयस्कों मा दस्त व्यवहार को कसरी व्यवहारमा रुचि राख्छन्। कुन विवरणमा र हामी यो लेखमा बन्द हुनेछौं।
दस्तुर के हो?
दस्तरा वा दहिराको अधीनमा लक्षणको अर्थ हो, जुन हिन्दूको किसिमको एक को विशेषता हो। वैज्ञानिक टर्मिनोलोजीमा डायरको धेरै पद मानव शरीरको अवस्थालाई बुझाउँछ, जसमा आंतको विनाशको प्रक्रिया एक तरल मल संग भएको छ जुन3दिनमा र धेरै माथि देखाउँछ। यसको अतिरिक्त, क्लिनिक तीव्र (14 दिन भन्दा कम) र पुरानो रूपहरू (15 दिन भन्दा बढी) बीच भिन्न हुन्छ।
अभ्यास शो को रूप मा, वयस्कों मा दस्तहरुको उपचार एक कारण को स्थापना संग शुरू गर्न को लागी शुरू गर्न को लागी शुरू गर्न को लागी शुरुवात को रूप मा जल्द देखि जल्द आफ्नो अभिव्यक्तिहरुलाई समाप्त गर्न को लागी अनुमति दि्छ।
दस्त को सबै भन्दा साधारण कारणहरु मध्ये एक भाइरस र जीवाणु हो। यसबाहेक, यस्तो घटनाको प्रारम्भमा उत्प्रेरित हुन सक्छ: एनन्सस्पेसिफिक कलिथिस, पुरानो प्यान्रेटाइटिस, अक्सर क्रोएक्स रोगको विभिन्न प्रकारका प्रयोगको प्रयोग, आंतमा अघिल्लो अपरेटिङ उपचारको परिणाम। साथै, कसैले विभिन्न एलर्जी प्रतिक्रियाहरू, जिंक, uremia कमी, स्वतन्त्र तंत्रिका तंत्र को निराशा बहिष्कृत गर्न हुँदैन।
महत्वपूर्ण! हिसाब दस्त्रा संधै पाचन तंत्र मा अवरोध को कारण देखि नहीं हो सकता, या यो एक अन्य बीमारी को लक्षण हो, जसमा कुनै पनि तरिका मा उल्लेख गर्दैन।
सामान्य पाचन प्रक्रिया कसरी हुन्छ?
सामान्यतया, पाचन प्रणालीमा खाना खानुपर्छ विशेष एंजाइमहरु को प्रभाव को तहत उत्सुक छ कि यो उपयोगी घटकों मा विभाजित: अमीनो एसिड, वसा ... यसको वाहेक, यो कुनै रहस्य छैन कि आंत को विभिन्न क्षेत्रहरु मा शरीर मा भोजन को पाचन को विभिन्न प्रक्रियाहरु पछि पछि तिनीहरूको विभाजन र अवशोषण। यही कारणले गर्दा बानीको कुनै पनि उल्लङ्घन र पाचन तंत्र विकारको लागी जान्छ, जुन प्रायः दस्तक को रूप मा प्रकट हुन्छ। उदाहरणको रूपमा, तपाईं ओमोटिक दहिरोको नेतृत्व गर्न सक्नुहुनेछ, जो एक निश्चित मात्रामा ठूलो आंतिनमा जम्मा हुन्छ पछि रक्तचापमा प्रवेश नगर्ने, यसैले ठूलो मात्रामा नमी को भण्डारमा जम्मा हुन्छ। तदनुसार, यो दस्तुर को शुरुआत मा जान्छ।
साधारणतया, वयस्कों मा दस्त व्यवहार को नैदानिक गतिविधिहरु संग शुरू हुन्छ जो एन्निनेसिस संग शुरु हुन्छ, जसको लागी चिकित्सक को खोज पछि र पछि पछि एक ब्रेकडाउन थियो, चाहे अन्य लक्षण हो (चाहे उच्च बुखार, दुखाइ, पट्टा)। रोगको अनुमानित चित्र पछि स्थापित भएपछि, प्रयोगशाला परीक्षणहरू नियुक्त गरिन्छ, जसको बेला यो खून, ब्याक्टेरियललोजिकल विश्लेषणको मल, र पोषक तत्व मिडियामा संस्कृतिको लागि आवश्यक हुन सक्छ । यसको अतिरिक्त, केहि नग्नताहरू स्पष्ट गर्न, यो विशेष फाइबर-ओप्टिक मेडिकल साधन प्रयोग गरेर सिगमोइड बृहदान्त्रको सिगमोइडोस्कोपको परीक्षण गर्न आवश्यक हुन सक्छ। यी परीक्षणहरूको उद्देश्य रोगको स्रोत निर्धारण गर्न र, यदि सम्भव छ भने, घर मा वयस्कों मा दहिरा उपचार को वर्णन छ।
दस्त को मुख्य अभिव्यक्तिहरु मा शामिल छ:
पेट र दुखाइको पीडा।
तरल मल, जुन हल्का रंग छ।
एमिटिक आग्रह गर्दछ।
तेज थकान र सुक्खा छाला।
यो राज्य, नियमको रूपमा, 7-14 दिनसम्म रहन्छ। तर विशेष सावधानीको कारणले गर्दा: तापमानमा तेज वृद्धि , पेटमा बलियो रिजोनोन र स्टूलमा रक्त र चकलेटको उपस्थितिले गर्दा ती लक्षणहरूले गम्भीर बीमारीको सम्भावनालाई संकेत गर्दछ।
तर, अभ्यास शो को रूप मा, दस्त को शुरुवात को तत्काल निराशा र पहिलो दिन मा एक धेरै लगातार मल को विशेषता हो।
एक नियमको रूपमा, यसको घटनाको कारण विभिन्न सूक्ष्मजीवहरू छन्, कि तिनीहरूको क्रियाकलापहरूले पाचन मार्गलाई बाधा पुऱ्याउँछ। यी सूक्ष्मजीवहरूले हानिकारक वातावरण सिर्जना गर्दा, हानिको कारणले आंतको सम्पूर्ण कार्यविधि फैलाउने, र यसको चिसो झिल्लीमा घुसिरहेको हुन सक्छ।
यो मनमा हुनु पर्छ कि यस्तो सूक्ष्मजीवविज्ञानले गर्दा दस्त्रालाई लामो समयसम्म लामो हुन सक्छ र पर्याप्त उपचारको अनुपस्थितिमा पनि मानव स्वास्थ्यको लागि गम्भीर खतरा हुन सक्छ।
आजसम्म, त्यहाँ धेरै प्रकारका संक्रामक मूलको दस्त हो:
वाटर दस्तुर। यो प्रकार मुख्यतया सूक्ष्मजीवणहरुको लागि विशेषता हो जुन एक विषाक्त छ।
रगत को स्राव संग। प्राय: यस प्रकार को डिसेंटरी, सैलमोनोसिस मा प्रकट हुन्छ। यसको घटनाको कारण जीवाणुहरू हो जसले चिसो झिल्ली घुमाउँछ र त्यसो गर्दा यसले गम्भीर चोट ल्याउँछ।
दहिरो को संक्रामक प्रकृति को मुख्य लक्षणहरु मध्ये एक को छानबीन को तीव्र रूप हो।
विराल दहिरा को लागी अप्ठ्यारो बुखार र डिसपपिटिक विकारहरु द्वारा विशेषता हो। यसको निदानले इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपी वा विशेष इम्युनिकल एसिडको प्रयोग समावेश गर्दछ। रोगको सक्रिय चरणको पाठ्यक्रम औसतमा 3-6 दिन भन्दा बढि हुन्छ। एक नियम को रूप मा, उपचार को गर्भावस्था को बजाय अनुकूल छ।
एक नियमको रूपमा, यो रोग हुन्छ जब तपाईं दस्तिकाहरूका लागि दबाउ लगाउन आवश्यक छ, तर यो ध्यान दिन योग्य छ कि, कुनै अन्य बिरामीहरू जस्तै स्व-दबाइ समस्याको बढ्दो हुन सक्छ। यसैले यो केवल चिकित्सकलाई नियुक्त गरेको मात्र लिन आवश्यक छ। यसको अतिरिक्त, अतिरिक्त धनबाट देखि प्रायः लागू औषधहरू प्रयोग गर्दथे जुन सब्जीको तेलमा आधारित हुन्छ र एक चक्र प्रभाव छ। उदाहरणको रूपमा, तपाईं हर्बल शुल्क ल्याउन सक्नुहुन्छ।
साथै यस अवस्थामा, प्रायः दबाइहरु को लागि दबाइहरु लाई निर्धारित गर्दछ, जसमा एक सक्रिय पदार्थ - लोपेरराइड हुन्छ। तथ्यलाई ध्यान दिनु पर्छ कि यस पदार्थमा आंतों का परस्ट्रलिस मा एक प्रभावकारी प्रभाव छ, पछि पछि मल मल को आंदोलन मा देरी को ओर ले जान्छ। तर यहाँ यो मनमा हुनु पर्छ कि दिमाग आफै शरीर को एक प्राकृतिक सुरक्षात्मक प्रतिक्रिया हो, जसमा आंत मा संचित भएका धेरै खतरनाक पदार्थहरु को एक निपटान छ। यसैले, यस प्रक्रियाको बलियो गतिको साथ, आफैलाई हानिकारक हुने सम्भव छ।
महत्वपूर्ण! रोगको संक्रामक प्रकृतिमा, एक एंटीबायोटिक डाक्टर द्वारा निर्धारित गर्न सकिन्छ। दस्तक को मामला मा, विशेष ड्रगहरु लाई सिफारिश गरिएको छ, जो पोषक तत्व मा मिडिया मा जीवाणुहरु पछि पत्ता लगाउन को लागी सबै भन्दा ठूलो संवेदनशीलता दिखाए।
दस्त को पारंपरिक उपचार को अतिरिक्त, यसको उपचार पनि प्रभावी छ, लोक उपचार को मदद संग। त्यसोभए, गरौं उनीहरूको सबैभन्दा लोकप्रिय।
हामी ओक को छाल किनछौं। एउटा गिलास 1 टाँस्नुहोस्। चम्मच र उबलते पानी संग राख्नुहोस्। त्यस पछि, हामी यसलाई एक घण्टाको लागि जोर दिएर एक दिनको लागि 1-2 चम्मच लिन्छौँ। सम्झनुहोस् कि त्यो समय आवतित हुनुपर्छ जुन रिसेप्शनहरू बीचको अन्तराल धेरै घण्टा (3-4) भन्दा बढी हुँदैन। अभ्यास शो को रूपमा, यसको असर लगभग तुरुन्तै छ। तर यदि दस्तिका लक्षणहरू अर्को2दिनभित्र बन्द हुँदैन भने, यो उपचारको अन्य तरिकाहरूको बारेमा सोच्ने सल्लाह दिइएको छ।
महत्वपूर्ण! घर मा वयस्कों मा दस्तक को उपचार जरूरी चारकोल को स्वागत संग हुनु पर्छ जो कि पुरा प्लेट संग लिइएको छ र उबले पानी संग धोए जान्छ।
यसबाहेक, दहिरोको लागि प्रभावकारी लोक उपचार छनौट गर्दा, तपाईंले अनारको सुक्खा क्रस्टमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। तिनीहरूलाई सजिलो बनाउनुहोस् र घरमा। यो गर्न, तपाईं अनार कुल्ला गर्न, यसलाई छील्न र सेतो मासु हटाउन आवश्यक छ किनभने यसमा कुनै उपयोगी पदार्थ छैन। त्यस पछि, सबै कि बाहिरी छील सुखार्न र दिनको समयमा ती भाइबहिनीहरू लगाउँदासम्म सबै लक्षणहरू पूर्ण रूपमा हराउँदछ।
वयस्कों मा दस्तिका को लागि सबै भन्दा प्रभावकारी उपचार के बारे मा सोच्न को लागी, यो सिफारिश गरिएको छ कि तपाईं निम्नलिखित नियमहरु को पालन गर्नुहोस:
लामखुट्टेको प्रयोग सीमित वा बहिष्कार गर्नुहोस्।
आफ्नो आहार व्यवस्थित गर्नुहोस्।
केवल उबलेएको वा फिल्टर गरिएको पानी पिउनुहोस्।
तनावपूर्ण अवस्थाहरू हटाउनुहोस्।
एंटीबायोटिक्स दुरुपयोग नगर्नुहोस्।
तपाईंको आहारमा सम्भवतः धेरै फल र सब्जहरू समावेश गर्नुहोस्।
यदि तपाईं उत्पादनको गुणको बारेमा कुनै शङ्का छ भने, तुरुन्तै छुटकारा पाउनुहोस्।
उचित रूपमा आफ्नो उत्पादनहरू भण्डार गर्नुहोस्।
सम्झनुहोस्, त्यो उपचार प्रभावकारी र छोटो अवधि थियो, यसलाई दस्तुरको पहिलो लक्षणमा तत्काल डाक्टरलाई सल्लाह दिन आवश्यक छ।
कारणहरू, लक्षणहरू, निदान र आंत कैंडीडिजिसको उपचार
Atherosclerosis, लक्षण, उपचार र उपचार को रोकथाम
उपचार र महिलाहरु मा यूरेपोलिया को लक्षणहरु
मुख्य कन्सोल CSS लागि आज्ञा
अंग्रेजी मा विशेषण को तुलना
फर्सी puree: स्वादिष्ट र स्वस्थ
आधुनिक विश्व ट्यांक र आफ्नो सक्रिय रक्षा